takeoff ပြီးနောက်ပိတ်ပစ်စီမံကိန်းအဲယားဘတ်စ် A321 အင်ဂျင်
မေးခွန်း takeoff ပြီးနောက်ပိတ်ပစ်စီမံကိန်းအဲယားဘတ်စ် A321 အင်ဂျင်
3 နှစ်ပေါင်း6days ago #223 by JanneAir15
ဟလို! ငါအဲယားဘတ်စ် A320 မိသားစု, Mega Pack ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါပွီ။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါမော်ဒယ်များ (A318, A319, A320, A321) စမ်းသပ်ပြီးကြပေမယ့်ငါ A321 နှင့်အတူ takeoff သည့်အခါ၎င်း၏အင်ဂျင်ဘီးမြေပြင်ကိုချွတ်ရချက်ချင်းအပြီးပိတ်ပစ်။ ဒီဗူး၏အခြားလေယာဉ်များကသာ A321 အပေါ်င်ဤပြဿနာမရှိကြပါဘူး။ ငါစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနောက်တော်သို့လိုက်နဲ့မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနှင့်အတူပေါ်အင်ဂျင်လှည့်ပြီ။ ငါထို့နောက်မှားယွင်းနေသည်အဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူး။ ဒီနှင့်ငါ့ကိုကူညီပေးပါ။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: joval
3 နှစ်ပေါင်း6days ago #224 by Gh0stRider203
ငါကို download လုပ်ပါကတစ်ဦးကိုကြည့်ယူပါလိမ့်မယ်, အ 747-400LCF အတွက်, ဒါပေမယ့်ငါဆင်းသက်တစ်ချိန်က - ငါလေယာဉ်အလယ်၌င့်အဖြစ်ကျနော်တို့ (KDFW LFRG) စကားပြောဆိုသကဲ့သို့ငါအများကြီးမပွုနိုငျသညျ။
3 နှစ်ပေါင်း6days ago #225 by Tonny0909
သငျသညျ upperhead panel ကိုမှာ FLT CTL- အပိုင်းမှာ ELAC2 ဟာ Off သတ်မှတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ အခြားအသုံး ON ထားကြ၏။ (အတွင်းရေးမှူး 2,3 နှင့် FAC2)
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: Gh0stRider203, JonesyMcJonesFace
3 နှစ်ပေါင်း6days ago #226 by JanneAir15
3 နှစ်ပေါင်း6days ago #227 by JanneAir15
အဘယ်သူမျှမပြုလုပ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြဘူး။ ငါနေဆဲတူညီတဲ့အမှား "Generator ကို 1, Generator ကို2နှင့်ဟိုက်ဒရောလစ် 1 # 2" ဟုအင်ဖို display ပေါ်မှာအနီရောင်အမှတ်အသားပြုထားကြသည်တယ်။
3 နှစ်ပေါင်း6days ago #228 by JanneAir15
တော့ဘူးကူညီဖို့ရန်မလိုပါပါ! ငါပြဿနာ fixed ။ Tonny0909, သင်မှန်ပေမယ့် ELAC2 တစ်ခုတည်းသော FLT CTL ဖြစ်ပါသည်သင်က OFF ရှိသည်ရှိသည်ပြောင်းပါ။ အခြား switches သင်တို့အပေါ်မှာရှိသည်ဖို့ရှိသည်! (ထို upperhead panel ကိုရဲ့ဘယ်ဘက်အပိုင်းအပါအဝင်) ဒါကြောင့်ပဲ! ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အကူအညီနဲ့ Tonny0909 များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
3 နှစ်ပေါင်း6days ago #229 by Tonny0909
ကောင်းပြီငါကလည်းငါ့မူရင်း post ကိုမှာ:
"အခြားသုံး ON ထား၏။ (အတွင်းရေးမှူး 2,3 နှင့် FAC2)"
3 နှစ်ပေါင်း6days ago #230 by Dariussssss
ဖြေရှင်းနိုင်ဒီတစ်ခုကြည့်ဖို့အတှကျဝမျးသာ။ သင်ပိုမိုဘာမှမလိုအပ်ပါက, ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။
3 နှစ်ပေါင်း5days ago #234 by Gh0stRider203
Dariussssss wrote: ဖြေရှင်းနိုင်ဒီတစ်ခုကြည့်ဖို့ဝမ်းမြောက်ခြင်း။ သင်ပိုမိုဘာမှမလိုအပ်ပါက, ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။
ကြီးမားသည်သူ၏အကူအညီတောင်း Tonny0909 ရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်!
0.257 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်